हो चि मिन्ह विचार र बहस
म भीडको अघिल्तिर उभिएर कराएझैं कराएँ –‘आदरणीय शहीदहरु, देशबासीहरु ! यही हो हाम्रो मुक्तिको बाटो ।’ प्रथम विश्वयुद्धपछि म फ्रान्समा फोटोग्राफरकोमा फोटो धुलाउने र ‘पुराना चिनियाँ भाँडाकुँडा’ (फ्रान्समा बनेको ) मा रङ लगाउने मान्छेको रुपमा रहेँ । मैले फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरुले भियतनाममा गरेका अपराधहरु कबोल गरिएका पर्चाहरु बाँडेँ ।
त्यसबेला मैले अक्टोबर क्रान्तिको समर्थन त्यसको ऐतिहासिक महत्व ठम्याएर होइन, लहैलहैमा गरेको थिएँ । म लेनिनलाई प्रेम र मुरीमुरी प्रशंसा गर्थे किनभने उनी महान् देशभक्त थिए जसले आफ्ना देशवासीहरुलाई स्वतन्त्र बनायो । त्यस बेलासम्म मैले लेनिनको एउटा पनि किताव पढेको थिइनँ ।
म फ्रेन्च समाजवादी पार्टीमा लाग्नुको कारण उनीहरुले मप्रति र शोषित उत्पीडित जनताहरुको सङ्घर्षप्रति सहानुभूति दर्शाउनु नै थियो । तर, म पार्टी,ट्रेड युनियन, समाजवाद या साम्यवादका बारेमा भुत्दोभाङ पनि जान्दिनथेँ ।
पार्टीका शाखाहरुमा समाजवादी पार्टी दोस्रो इन्टरनेसनलमा रहने कि नरहने, कि अर्को अर्ध–दोस्रो इन्टरनेसनल खोल्ने अथवा लेनिनको तेस्रो इन्टरनेसनलमा पो सामेल हुने हो कि भन्नेजस्ता बहसहरु गरमागर्मी रुपमा चल्थे । म हत्तामा दुई या तीनपटक बैठकमा उपस्थित हुन्थेँ र ध्यानपूर्वक छलफल सुन्थे । पहिला त मैले राम्ररी कुरा बुझ्दा पनि बुझिनँ । किन यति साह्रो चर्काचर्की भइरहेको छ ? दोस्रो, अर्थ–दोस्रो या तेस्रो जुनसुकै इन्टरनेसनलले क्रान्ति गर्ने हो भने किन यस्तो बाझाबाझ ? अनि पहिलो इन्टनेसनल चाँही के भयो त ?
मैले एकदमै जान्न चाहेको कुराचाँहि कुन इन्टरनेसनल औपनिवोशिक मुलुकहरुको पक्षमा छ त भन्ने थियो तर यस विषयमा बैठकमा जोडदार रुपमा कुनै उठ्दैनथे । मैले यो कुरा बैठकमा उठाएँ । केही कमरेडहरुले भन्नुभयो–‘औपनिवेशिक मुलुकहरुको पक्षमा दोस्रो होइन, तेस्रो इन्टरनेसनल छ । मलाई एकजना कमरेडले लेनिनको ‘जातीय र उपनिवेशबारेको थेसिस’ पढ्न दिनुभयो जुन क्ष्’ज्गmबलष्तभ ले प्रकाशन गरेको थियो ।
लेनिनको उक्त थेसिस (प्रस्थापना) मा मैले नबुझ्ने थुप्रै राजनीतिक शब्दहरु थिए । तर घुढा धसे पटकपटक पढेपछि मैले त्यसको चुरो कुरा अठ्याएँ । त्यसले ममा कस्तो आवेग, आशा, प्रष्ट दृष्टिकोण र आत्मविश्वास पैदा ग¥यो । म त खुसीले रोएँ । कोठामा एक्लै बसेको बेलामा पनि म भीडको अघिल्तिर उभिएर कराएझैं कराएँ –‘आदरणीय सहिदहरु, देशबासीहरु ! हामीले चाहेको यही हो, यही हो हाम्रो मुक्तिको बाटो ।’ त्यसपछि लेनिन र तेस्रो इन्टरनेसनलप्रति मेरो पुरै भरोसा बढ्यो ।
सुरुसुरुमा पार्टी शाखाका बैठकहरुमा हुने छलफलहरु म सुन्थेँ मात्र, मलाई त्यहाँ उठ्ने कुराहरु सबै तार्किक लाग्थे, कुन सही हो र कुन गलत हो भन्ने कुरा म छुट्याउन सक्दिनथेँ त्यसपछि भने म पनि बहसमा होमिन थालेँ र जमेर बहस गर्न थालेँ । त्यसबेलासम्म पनि म फ्रेन्च भाषामा आफ्ना विचारहरु राम्ररी व्यक्त गर्न सक्दिनथेँ । तर लेनिन र तेस्रो इन्टरनेसनलमाथि हुने निराधा आक्रमणको म डटेर विरोध गथेँ । मेरो एउटै तर्क थियो, ‘यदि तपाईं उपनिवेशवादीहरुलाई घृणा गर्नुहुन्न भने, यदि तपाई उपनिवेशका जनताहरुको पक्षमा उभिनुहुन्न भने तपाईहरुले गर्न खोजेको क्रान्ति कस्तो हो ?’
लेनिनवाद चमत्कारी ‘बुद्धिको किताब’ मात्र होइन, भियतनामी क्रान्तिकारीहरु र जनताको लागि दिशानिर्देश गर्ने कम्पास पनि हो, –यो त्यस्तो उज्यालो सूर्य हो जसले हामीलाई अन्तिम जीत र समाजवाद तथा साम्यवादसम्मको बाटो देखाउँछ ।
म पार्टीको आफू सङ्गठित भएको शाखाको मात्र होइन, अन्य शाखाका बैठकहरुमा पनि ‘आफ्नो कुरा राख्न’ उपस्थित हुन थालेँ । मैले यहाँ भन्नैपर्छ कि कमरेडहरु मार्सल केचिन, भाइलन्ट काउटुरिअर, मुनमोसिउलगायतले मेरो वैचारिक स्तर उकास्न मद्दत गरेका छन् । अन्तिममा, सर्वोच्च कंगे्रसमा उहाँहरुसँग मैले पनि तेस्रो अन्तर्राराष्ट्रिय ( इन्टरनेसनल) मा सामेल हुने पक्षमा भोट खसालेँ ।
लेनिन र तेस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रियप्रतिको मेरो भरोसा साम्यवाद होइन, देशभक्तिको कारणले गर्दा बढेको हो । सङ्घर्षको क्रममा एकएक गरेर माक्र्सवाद–लेनिनवादको अध्ययनसँगसँगै व्यवहारिक कामहरुमा पनि सहभागी हुँदै गएपछि म समाजवाद र साम्यवादले मात्र विश्वभरिका शोषित–उत्पीडित जाति र मजदुरहरुलाई दासताबाट मुक्त गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । हाम्रो देशमा मात्र होइन, चीनमा पनि ‘चमत्कारी बुद्धिको किताव’ (द्यययप या ध्ष्कभ) को दन्त्यकथा प्रचलित छ । जब कोही ठूलो सङ्कटमा पर्छ भने उसले यो किताब पल्टाउँछ र बाटो फेला पार्छ ।
लेनिनवाद चमत्कारी ‘बुद्धिको किताब’ मात्र होइन, भियतनामी क्रान्तिकारीहरु र जनताको लागि दिशानिर्देश गर्ने कम्पास पनि हो, –यो त्यस्तो उज्यालो सूर्य हो जसले हामीलाई अन्तिम जीत र समाजवाद तथा साम्यवादसम्मको बाटो देखाउँछ । साभार